Urhwebo lwe-Ethereum - urhwebo lwe-Ethereum ngenzuzo ngoMeyi 2022 | Funda 2 Urhwebo
Funda ngesiKhokelo se-2 soRhwebo nge2022 kuRhwebo lwe-Ethereum!
Ii-Cryptocurrencies ngoku zisebenza kwibala le-multi-billion-dollar - kunye namaqonga e-intanethi akuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iimali zedijithali ngokulula. Nangona Bitcoin ilawula indawo, i-Ethereum yi-cryptocurrency yesibini ngobukhulu ngokwemali yemarike.
Oku kuthetha ukuba iindawo zorhwebo ze-Ethereum zilikhaya leemfumba zokuthengiswa kwemali kunye nokuthengiswa kwexabiso. Okona kubaluleke kakhulu, uya kuba nokhetho lokuthengisa i-Ethereum ngokuchasene nezinye i-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin, okanye ngeemali ze-fiat ezinje nge-USD.
Ngaba ujonge ukufumanisa ngakumbi malunga nendlela urhwebo lwe-Ethereum olusebenza ngayo? Ukuba kunjalo, siyakwamkela ukuba ufunde iSikhokelo soRhwebo se-2 ye-2022 kwi-Ethereum Trading.
Qaphela: I-Ethereum isebenza kwindawo yotyalo-mali oluqikelelwayo, ngoko ke kubalulekile ukuba ube nokuqonda okuqinisekileyo kweengozi ezisisiseko. Oku kunjalo ngakumbi ukuba uceba ukusebenzisa i-leverage.
Yaziswa kwi-2015, i-Ethereum yiprojekthi ye-blockchain evumela abasebenzisi ukuba bathumele kwaye bafumane ixabiso ngaphandle kokufuna umntu wesithathu. Endaweni yoko, uthungelwano olusisiseko lusasazwa bucala, oko kuthetha ukuba alinabanini okanye alilawulwa ngumntu omnye okanye iqumrhu. I-blockchain ye-Ethereum ixhotywe ngemali yayo yemveli enegama elifanayo-kungenjalo ibizwa ngokuba yi-'ETH '.
Ngokufana neBitcoin, i-Ethereum inexabiso lehlabathi lokwenyani. Oko kukuthi, unokutshintshisa iithokheni zakho ze-Ethereum kwiifiat currencies njengedola yaseMelika okanye iponti yaseBritane. Ngokumalunga nokugcina i-ETH yakho, oku kuya kufuneka ukuba kwenziwe kwi-wallet yangasese - ongayifaka kwi-desktop okanye kwisixhobo esiphathwayo. Oku ke kukuvumela ukuba uthumele iithokheni zakho ze-Ethereum komnye umsebenzisi, kunye nentengiselwano ithatha nje imizuzwana ye-16.
I-Ethereum yaziwa ngokuba yiprojekthi yokuqala ye-blockchain yokuzisa 'iikhontrakthi ezikrelekrele' kumzi mveliso we-cryptocurrency. Oku kuvumela abasebenzisi ukuba benze izivumelwano ngokungathembeki. Isivumelwano esisisiseko esisebenzayo sisebenza ngokungqongqo, ikhowudi esekuhleni-ke akukho qela linokutshintsha okanye lisirhoxise isivumelwano xa sele sithunyelwe.
Zithini i-Pros kunye ne-Cons of Trading Ethereum?
I-Ethereum isencinci - isenethuba lokungena kwimarike ngexabiso elifanelekileyo.
Unokurhweba i-Ethereum ngokuchasene nezinye ii-cryptocurrencies.
I-Ethereum nayo inokuthengiswa ngokuchasene neemali ze-fiat ezifana ne-USD kunye ne-GBP.
Ukurhweba nge-Ethereum nge-avareji, okanye ukuyithengisa ngokufutshane ngokuchasene nemali ye-fiat.
Iimfumba zeendawo zokurhweba ze-Ethereum - ezinye zazo zilawulwa.
Ukuqalisa ngokulula nge-debit/credit card okanye e-wallet.
Njengazo zonke ii-cryptocurrencies, i-Ethereum yiklasi ye-asethi eqikelelwayo kakhulu.
Ungalahlekelwa yimali eninzi ukuba awuyazi into oyenzayo.
I-Bitcoin inobuncwane obuninzi kunye nomthamo wokurhweba kune-Ethereum.
Ukuthengiswa kwe-Ethereum: iziseko
Nangona itekhnoloji esekelayo exhasa i-Ethereum blockchain ayisiyonto imfutshane yokuguqula, uninzi lwabantu abathenga i-ETH benza njalo njengesithuthi sotyalo-mali. Ngamanye amaxesha, abatyali mali baya kuthenga i-Ethereum ngokujonga ukuyibamba iminyaka eliqela. Oku kunethemba lokuyithengisa kwikamva ngexabiso eliphezulu kakhulu kunokuba bebehlawulile.
Ngokutsho oko, abanye abatyali mali bakhetha ukubandakanyeka kurhwebo lwe-Ethereum lwexeshana elifutshane. Kulapho uzakuthengisa khona Ethereum ngokuchasene nezinye iimali. Oku kunokuba yenye i-imali yedatha eyi-Bitcoin okanye iRipple, okanye imali eyinyani efana nedola yaseMelika. Nokuba yeyiphi na indlela, eyona njongo iphambili kukufumana inzuzo ngokutshintsha kwemali phakathi kweemali ezimbini- enye yazo yi-Ethereum.
Njengakwimeko ye-forex, urhwebo lwe-Ethereum lusekwe 'kwizibini'. Umzekelo, ukuthengisa i-BTC / i-ETH kuthetha ukuba uqikelela inqanaba lotshintshiselwano phakathi kweBitcoin ne-Ethereum. Kwangokunjalo, ngokuthengisa i-ETH / i-USD, ucinga ngenqanaba lotshintshiselwano phakathi kwe-Ethereum nedola yaseMelika.
Umzekelo, masithi i-ETH / USD okwangoku inexabiso nge-213.45. Oku kuthetha ukuba kuyo yonke ithokheni ye-1 ye-Ethereum onayo, umthengi uya kuhlawula i-213.45 yeedola. Eli nqanaba lotshintshiselwano liza kuhamba kwisibini ngomzuzwana, ukuze wenze inzuzo kufuneka uchonge ukuba yeyiphi indlela eza kuhamba ngayo kwixesha elifutshane.
Ukwenza oku, kuya kufuneka ubeke i-oda yokuthenga okanye i-odolo yokuthengisa.
Ukuba ucinga ukuba inqanaba lotshintshiselwano liza kuhamba up, emva koko uthelekelela kwimali emi kwicala lasekhohlo lesibini esonyukayo ngokuchasene naleyo yemali ekunene.
Kulo mzekelo, imali esekhohlo yi-Ethereum, ke ucinga ukuba iyonyuka xa ithelekiswa nedola yaseMelika. Ukuba iyenzeka, izinga lotshintshiselwano liya kunyuka.
Umzekelo, ukuba uvule i-odolo yokuthenga kwi-ETH / USD nge-213.45, kwaye wayivala nge-219.06, oku kuya kubonisa urhwebo oluyimpumelelo.
Ukuba ucinga ukuba imali ekunene izakwenyuka ngexabiso xa kuthelekiswa nemali ekhohlo, uyakholelwa ukuba inqanaba lotshintshiselwano liza phantsi.
Kulo mzekelo, oku kuthetha ukuba ucinga ukuba idola yaseMelika iya kunyuka ngexabiso ngokuchasene ne-Ethereum, ke kuya kufuneka ubeke iodolo yokuthengisa.
Umzekelo, ukuba uvule i-odolo yokuthengisa kwi-ETH / USD nge-213.45, emva koko wayivala ngo-201.96, oku kuya kubonisa urhwebo oluyimpumelelo.
Ukufumana intloko yakho xa uthenga uthengise kwaye ungathengisa iiodolo kunokudideka xa uqala ukujonga, ke makhe sijonge imizekelo embalwa.
✔ Umzekelo woRhwebo lwe-Ethereum-to-Fiat
Ukucoca inkungu, makhe sijonge ukuba urhwebo lwe-Ethereum-to-fiat lwaluza kubonakala njani.
Ixabiso langoku lesibini yi-210.50.
Ucinga ukuba i-Ethereum iphantsi kwexabiso, oko kuthetha ukuba inqanaba lotshintshiselwano luya kunyuka.
Ngaloo ndlela, ubeka iodolo yokuthenga kwisithinteli se-$ 1,000.
Kamva ngemini, i-ETH / USD inyuka ukuya kwi-215.30.
Njengoko ngoku u-2.28% kwinzuzo, uthatha isigqibo sokuphuma kwindawo yakho ngokubeka umyalelo wokuthengisa.
Njengoko ubona koku kungasentla, wenze urhwebo lwexesha elifutshane eliyimpumelelo kwi-ETH / USD. Kwibango leedola ezili-1,000 2.28, iinzuzo zakho ezi-22.80% zikwenzele inzuzo eyi- $ XNUMX.
✔ Umzekelo we-Ethereum-to-Crypto Trade
Isibini se-Ethereum-to-crypto sithetha ukuba uthengisa i-Ethereum ngokuchasene nenye imali yedatha. Oku kuyadideka kancinci, njengoko isibini singabizi xabiso kwimali yokwenyani efana ne-USD. Endaweni yoko, isibini sibiza amaxabiso kuphela kwii-cryptocurrensets.
Ngokufana nendawo ye-forex, ilungelo lokutshintshiselana lichazwe ngemali esekunene. Umzekelo, ukuba i-GBP / iUSD inexabiso nge-1.25, oku kuthetha ukuba ufumana i-1.25 yeedola zaseMelika kuyo yonke iponti enye yaseBritane. Kananjalo, ukuba i-BTC / ETH inexabiso kwi-1, oku kuthetha ukuba ufumana i-41.13 Ethereum kuyo yonke i-41.13 Bitcoin.
Nantsi indlela urhwebo oluya kusebenza ngayo ekusebenzeni:
Ixabiso langoku lesibini yi-41.13.
Ucinga ukuba i-Bitcoin i-overpriced, oku kuthetha ukuba izinga lokutshintshiselana liya kuhla.
Ngaloo ndlela, ubeka iodolo yokuthengisa kwindawo ye-$ 2,000.
Kamva ngemini, i-BTC / ETH iyancipha ukuya kwi-35.90.
Njengoko ngoku u-12.71% kwinzuzo, uthatha isigqibo sokuphuma kwindawo yakho ngokubeka umyalelo wokuthenga.
Njengoko ubona koku kungasentla, wenze urhwebo lwexesha elifutshane eliyimpumelelo kwi-BTC / ETH. Kwisibonda se- $ 2,000, iinzuzo zakho ze-12.71% zikwenzele inzuzo eyi- $ 254.20.
Ungayithengisa njani i-Ethereum?
Xa kuziwa kwinkqubo yokurhweba i-Ethereum, ininzi yale nto ixhomekeke kwindlela yokwenza i-asethi. Ngale ndlela, uneendlela ezimbini ongakhetha kuzo - ukurhweba kwi-cryptocurrency exchange, okanye ngokulawulwa CFD umrhwebi.
Ukurhweba nge-Ethereum kwi-Cryptocurrency Exchange.
Ukuze uthengise amathokheni kutshintshiselwano nge-imali yedatha, kuya kufuneka uxhase iakhawunti yakho ngemali yedijithali efana ne-Ethereum. Nje ukuba wenze, unokuyithengisa ngamakhulu ezinye iingqekembe- ezinje ngeBitcoin, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, okanye iStellar. Xa kuziwa ekurhoxiseni inzuzo yakho, yonke into iya kufakwa kwi-cryptocurrensets.
Ngoku, ukuba ufuna ukurhweba nge-Ethereum ngemali yelizwe lokwenyani njenge-USD, oku kuya kuba yingxaki ngakumbi xa usebenzisa utshintshiselwano nge-imali yedatha. Kungenxa yokuba iqonga aliyi kuba namandla okugcina i-USD ngaphandle kokuba ilawulwa. Kwiimeko ezininzi, abalawuli belizwe bayathandabuza ukukhupha iilayisensi zotshintshiselwano nge-imali yedatha.
Kananjalo, kuya kufuneka uthengise i-Ethereum yakho ngokuchasene ne-imali yedatha ekhonkxiwe kwi-USD- enje ngeTether. Ngaphaya koko, utshintsho olungenamthetho kwi-cryptocurrency alunakho ukwamkela iidiphozithi ngohlobo lwemali ye-fiat, ke ngekhe ukwazi ukufumana imali ngendlela yentlawulo yemihla ngemihla.
Ukuthengisa i-Ethereum kwi-CFD Broker
Singacebisa ukuba siqwalasele ukufaneleka komthengisi weCFD ekuqhubekeni kwesiza sokurhweba se-Ethereum. Okokuqala nokuphambili, i-CFD brokers kufuneka ilawulwe. Xa iipulatifomu zinelayisensi yomzimba omnye onje FCA, ASIC, okanye CySEC – uya kuxhamla kuluhlu lwezikhuselo.
Oku kuquka imfuneko yokugcina iimali zabaxumi kwii-akhawunti zebhanki ezahlukeneyo ukusuka kweyayo. Ngokufanayo, abathengisi be-cryptocurrency be-CFD banamandla okwamkela iidiphozithi kunye nokutsalwa kwemali ngeendlela zokuhlawula zehlabathi lokwenene. Oku kuthetha ukuba unokufumana imali ngokulula eqongeni ngedebhithi/ ikhadi letyala, iakhawunti yebhanki, okanye i-e-wallet efana nePayPal.
Ngokurhweba i-Ethereum CFDs, oku kuthetha ukuba awuyi kuba nesixhobo esisisiseko. Kodwa ngaba oko ngokwenene kubalulekile? Okubaluleke kakhulu, usafumana ukurhweba nge-Ethereum ngokuchasene nezinye ii-cryptocurrencies, ngelixa kwangaxeshanye uya kufumana ukufikelela kwii-crypto-to-fiat pairs njenge-ETH/USD. Njengoko sityhila kwicandelo elilandelayo, uya kuba nakho ukusebenzisa i-Ethereum kunye nokuthengisa okufutshane kwi-USD.
Ukunyusa kunye nokuthengisa okufutshane
Xa usebenzisa utshintshiselwano lwe-cryptocurrency yemveli, akuyi kuba nzima nje ukufaka imali ngendlela yentlawulo yemihla ngemihla, kodwa uya kuba nobunzima bokufikelela kwizixhobo ezintsonkothileyo. Ngokuqinisekileyo, ukuthandwa kweBitMEX kunika i-crypto-derivatives, kodwa iqonga lisebenza ngendlela engalawulwayo kwaye 'iqhinga' lisekelwe eSeychelles.
Kananjalo, ukuba ufuna ukhetho lokusebenzisa amandla kunye nokuthengisa okufutshane kwi-Ethereum, uyacetyiswa ukuba usebenzise umthengisi weCFD olawulwayo.
Ubume yinkqubo yokurhweba ngemali eninzi kunaleyo unayo kwiakhawunti yakho. Oku kukuvumela ukuba wandise inzuzo yakho, njengoko iinzuzo zakho ziya kuphindwa ngomlinganiselo owukhethileyo. Ngokomzekelo, ukuba ubeke umyalelo wokuthenga oxabisa i-$ 1,000 kwi-ETH/USD kunye ne-leverage ye-5x, urhwebo luya kuxabisa i-$ 5,000.
Apha ngezantsi ngumzekelo wento enokubonakala ngathi urhwebo oluhlaziyiweyo lwe-Ethereum.
Ubeka i-$ 1,000 yokuthenga i-odolo kwi-202.50.
Usebenzisa i-leverage ye-10x.
Kamva ngemini, i-ETH / USD inyuka ukuya kwi-208.40.
Oku kusebenza kwinzuzo ye-2.91%, ngoko unquma ukuvala urhwebo kwinzuzo.
Ngokwesiqhelo, iipesenti zakho zeedola ezili-1,000 2.91 kwiipesenti ezingama-29.10 ngekwenze inzuzo epheleleyo nge-10 yeedola. Nangona kunjalo, njengoko ufake isicelo kwi-290.10x, oku kuyandisa inzuzo yakho iyonke kwi $ XNUMX.
Kwicala elisezantsi, ukurhweba nge-Ethereum kunye nomyinge kunokuba yingozi kakhulu, njengoko unethuba lokuphulukana 'nomda' wakho. Umda ufana nediphozithi oyifunayo kumrhwebi xa ufaka isicelo. Umzekelo, ukuba usebenzisa i-4x kwi-balance ye-100, uthengisa nge- $ 400. Njengeedola ezili-100 ukuya kwi-1/4 yeedola ezingama-400, oku kuthetha ukuba umda wakho ungama-25%.
Njengoko uza kubona kumzekelo ongezantsi, unethuba lokuphulukana nediphozithi yakho yomda ukuba urhwebo luchasene nawe ngexabiso elifanayo.
Ubeka iodolo yokuthengisa kwi-41.50.
Usebenzisa i-leverage ye-4x, kwaye umda wakho yi-$ 250 (25%).
Oku kuthetha ukuba uthengisa nge-1,000 yeedola.
Ukuba ixabiso le-BTC / ETH lihla nge-25% (31.12), ngoko urhwebo lwakho luya kupheliswa.
Oku kuthetha ukuba urhwebo luvaliwe ngokuzenzekelayo kwaye umthengisi ugcina umda wakho. Kule meko, umda wafikelela kwi-250 yeedola.
Olona hlobo kuphela kwendlela onokuyiphepha ngayo ukucinywa kukubeka imali ngakumbi kwi-akhawunti yakho yomda we-Ethereum. Kwiimeko ezininzi, umrhwebi ekubhekiswa kuye uya kukwazisa xa usondela kwindawo yokuphelisa, ethi ikunike ithuba lokunyusa ibhalansi yomgama.
Abarhwebi beCFD abalawulwayo bayakuvumela ukuba ufinyele i-cryptocurrensets emfutshane njenge-Ethereum ngokulula. Ngokwenza njalo, uqikelela kwixabiso le-Ethereum yokuhla ngokunxulumene ne-USD. Ukuba kunjalo, uyakwenza inzuzo.
Apha ngezantsi ngumzekelo wendlela oku kusebenza ngayo ekusebenzeni:
Ixabiso le-Ethereum yi-$ 240.00.
Uyi-bearish kakhulu kwiprojekthi, ngoko uthatha isigqibo sokubeka iodolo yokuthengisa kwi-ETH / USD.
Ixabiso lakho lilonke li-$2,000.
Kwiintsuku ezimbalwa kamva, i-Ethereum ixabisa i-$ 190.00, oku kuthetha ukuba ilahlekelwe phantse i-20% malunga ne-USD.
Ngaloo ndlela, uthatha isigqibo sokwenza imali kwingeniso yakho ngokubeka umyalelo wokuthenga.
Njengoku kungasentla, ngokunqamla i-Ethereum xa ithelekiswa ne-USD kwisamba esipheleleyo se- $ 2,000- ilahleko engama-20% ikubizele i $ 400 kwinzuzo.
Imirhumo yokuThengisa i-Ethereum
Iindawo zokurhweba ze-Ethereum ziya kuhlala zibiza intlawulo yohlobo oluthile, ke kubalulekile ukuba uqonde ukuba uza kuhlawula malini ngaphambi kokuba ubhalise. Nangona ulwakhiwo lwamaxabiso oluthile luya kwahluka kubarhwebi ukuya kubroker, apha ngezantsi sidwelise eyona mirhumo iphambili ekufuneka uyazi ngayo.
🥇 Imirhumo yedipozithi / yokuRhoxiswa
Ezinye iindawo zorhwebo ze-Ethereum ziya kukuhlawulisa umrhumo ukuze ufumane imali ngaphakathi nangaphandle kweqonga. Umzekelo, ukuthandwa kweCoinbase kubiza i-3.99% yokusebenzisa i-debit okanye ikhadi lekhredithi.
Oku kuya kuba yimali eyi- $ 39.99 kwidiphozithi eyi- $ 1,000. Oku kwahluke ngokupheleleyo kumaqonga afana ne-eToro, ekuvumela ukuba ubeke imali simahla.
Ngokufanayo, ezinye iindawo zorhwebo ze-Ethereum ziya kukuhlawulisa imali yokurhoxa, jonga oku ngaphambi kokuvula iakhawunti.
🥇 IiKomishini zoRhwebo
Uninzi lwamaqonga orhwebo e-Ethereum aya kukuhlawulisa ikhomishini yorhwebo. Ukuba bayakwenza, oku kuhlawuliswa ngalo lonke ixesha uvula kwaye vala indawo. Umzekelo, iCoinbase ibiza ikhomishini ye-1.5% kwisixa semali yoku-odola.
Oku kuthetha ukuba i-odolo yokuthenga i-500 yeedola iya kukuxabisa i-7.50 yeedola. Ukuba uthengisile i-Ethereum yakho xa yayixabisa i-800 yeedola, oku bekuya kukubiza i-12 yeedola kwikhomishini xa uvale indawo.
Ubume bexabiso elinje lubiza kakhulu, ngakumbi ukuba uloluhlobo lomrhwebi othanda ukubeka iimfumba zeodolo.
🥇 ixesha ukusasazeka
The sasaza yenye intlawulo enxulumene norhwebo ekufuneka uyivavanye. Kwabo abangaziyo, lo ngumahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nokuthengisa leasethi. Umsantsa phakathi kwala maxabiso mabini uqinisekisa ukuba abathengisi kunye notshintshiselwano bahlala besenza inzuzo-nokuba yeyiphi na indlela yentengiso.
Umzekelo, masithi uthengisa i-ETH / USD. Ukuba ixabiso lokuthenga ukuba $ 203, kwaye ixabiso lokuthengisa yi $ 200, oku kufikelela kumahluko we-1.47%. Ngokwemigaqo kaLayman, oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uzuze i-1.47% ukuze nje uphule.
Ngapha koko, ukuba umrhwebi wakho omkhethileyo uhlawulisa ikhomishini yokurhweba, kuyakufuneka wenze nangakumbi ukogquma ukusasazeka.
🥇 Imirhumo yezemali yangokuhlwa
Imirhumo yokufumana imali ngobusuku ibaluleke kakhulu ukuvavanya ngaphambi kokujoyina indawo yokurhweba ye-Ethereum. Le yintlawulo ehlawuliswa ngumrhwebi xa ufaka isicelo okanye uthengisa i-asethi emfutshane. Njengokuba uboleka imali kubuchwephesha, oku kuhlawuliswa njengenqanaba lenzala.
Umzekelo, ukuba uthengisa nge- $ 10,000 exabisekileyo yeemali ezixhuzuliweyo, kwaye umrhumo wobusuku ubusuku ngu-0.05%, uya kuhlawula umrhumo we- $ 5 ngosuku ngalunye ukuze ugcine isikhundla sivulekile. Ngokuqhelekileyo, oku akuyi kuba ngumcimbi ukuba ujonge ukurhweba ngexesha elifutshane, njengoko iifizi zinokuthi zibe ngumzuzu.
Nangona kunjalo, ukuba ugcina urhwebo oluvunyiweyo luvulekile ixesha elide, iindleko zinokuqala ngokukhawuleza ukudibanisa.
Ukuze ulinganise indlela ezinokuthi zihambe ngayo iimarike, kuya kufuneka usebenzise inani lezixhobo zophando. Ukuba akwenzi njalo, uthengisa ngokungaboni kakuhle. Zimbini iindlela eziphambili zophando kwimeko yorhwebo lwe-Ethereum - uhlalutyo lobuchwephesha kunye nohlalutyo olusisiseko.
Uhlalutyo lobuchwephesha yinkqubo yokufunda iitshathi. Uya kujonga kwiimpawu zembali, kunye nendlela ezi zinto zihambelana ngayo ngoku amanyathelo ixabiso esi sibini. Ingathatha iinyanga ezininzi, ukuba akunjalo iminyaka Ukuqonda ngokupheleleyo indlela yokufunda iitshathi ngokufanelekileyo. Kananjalo, kuya kufuneka unikezele ixesha elininzi kangangoko kunokwenzeka ekufundeni urhwebo lwakho.
Ukukunceda endleleni, abahwebi abanamava baya kusebenzisa kakuhle izikhombisi zobugcisa. Ezi zixhobo ezikunika ulwazi malunga nentsingiselo yangoku yesibini esikhethiweyo. Oku kubandakanya ukuthanda kwe-RSI, i-Bollinger Bands, kunye ne-MACD. Iimpawu zobuchwephesha zijonga uluhlu lweemethrikhi, ezifana nomthamo wokurhweba, ukuxhaswa kunye nemigca yokuchasana, ukuguquguquka, kunye nokuba i-asethi ithengwa kakhulu okanye ithengiswa kakhulu.
Ngale nto ithethwayo, eyona ndlela iphambili kwisebe lohlalutyo lobuchwephesha kukusebenzisa ngokupheleleyo inkonzo yesiginali ye-cryptocurrency. Kulapho ufumana khona izilumkiso zexesha lokwenyani xa isalathiso sobuchwephesha sibonakalise ithuba elinokubakho lokurhweba. Umzekelo, i-Learn 2 Trade automated signal service izakukubonelela ngesibini sokurhweba (umzekelo i-ETH / USD), umqondiso ochongiweyo, kunye nokungena kunye nemiyalelo yokuphuma efuna ukubekwa.
Uhlalutyo olusisiseko alunikeli ngqalelo kwiitshathi zamaxabiso okanye iintsingiselo. Ngokuchasene noko, kusekelwe kwiziganeko zeendaba zehlabathi zangempela ezinokuchaphazela ulwalathiso lwexesha elizayo lwesibini sokurhweba. Ngokomzekelo, masithi u-Ethereum wenza intsebenziswano kunye nenkampani enkulu ye-blue-chip.
Njengoko ezi ziindaba ezilungileyo kakhulu zeprojekthi, kunokwenzeka ukuba ixabiso le-ETH liya kunyuka kwintengiso evulekileyo. Ngokufanayo, ukuba i-SEC ivume imarike ye-Ethereum yexesha elizayo, kwakhona, oku kuya kuba nefuthe elihle kwixabiso le-ETH.
Ngokubalulekileyo, uhlalutyo olusisiseko kulula ukuluqonda ngaphandle kohlalutyo lobuchwephesha, njengoko uninzi lweemeko zilungile ukuvavanya ukuba iindaba ezilungileyo okanye azilunganga.
Uwenza njani uMyalelo we-Ethereum?
Nokuba yeyiphi na impahla oceba ukuyirhweba nge-Ethereum, kuya kufuneka ufake iodolo kumthengisi we-intanethi. Ke ngoko, kukho inani leemethrikhi ekufuneka ziqwalaselwe ukuqinisekisa ukuba iqonga liyayazi into othanda ukuyifeza.
Thenga / thengisa iodolo: Okokuqala nokuphambili, kuya kufuneka uchaze ukuba uyafuna ukubeka iodolo yokuthenga okanye iodolo yokuthengisa. Ukuba ucinga ukuba isibini semali siya kunyuka ngexabiso, khetha iodolo yokuthenga. Ngenye indlela, ukuba ucinga ukuba isibini siza kwehla ngexabiso, beka i-odolo yokuthengisa.
Isiteki: Emva koko, kuya kufuneka ufake inani elipheleleyo onqwenela ukubeka umngcipheko kurhwebo. Umzekelo, ukuba ufuna ukuthengisa i- $ 500 kwi-BTC / ETH yokuthenga i-oda, faka i-500 yeedola kwibhokisi efanelekileyo.
Umda weMida: Ukuba ukhetha i-odolo yomda, uya kuchaza elona xabiso ufuna ukungena kulo kwintengiso. Umzekelo, masithi i-ETH / USD inexabiso nge-206.23, kodwa ufuna ukubeka i-oda yokuthenga xa ixabiso liyehla laya kwi-204.00. Ngokwenza njalo, i-odolo yakho ayizukuphunyezwa de kufike ixabiso le-204.00. Umyalelo uza kuhlala usebenza de oko kwenzeke, okanye urhoxise.
Umyalelo weNtengiso: Ngenye indlela, ukukhetha iodolo yentengiso kuya kukubona ufumana ixabiso elilandelayo. Oku kunokuba ngaphezulu okanye ngezantsi kwexabiso lentengiso langoku.
oluxhathisayo: Ukuba ufuna ukufaka amandla kurhwebo lwakho lwe-Ethereum, kulapho kufuneka uyenze khona. Nje ukuba ukhethe umyinge ofuna ukuwusebenzisa, ubungakanani beodolo yakho iyakuhlaziya. Umzekelo, ukuba ufake i-500 yeedola njengesibonda sakho, kwaye ukhetha ukunyusa i-5x, i-odolo yakho yokuthenga iya kuba nexabiso le- $ 2,500.
Ukuphulukana nokupheliswa: Kuya kufuneka usoloko ubeke i-stop-loss order xa uthengisa i-Ethereum. Oku kukuvumela ukuba unciphise umngcipheko xa iimarike zisondela kuwe. Umzekelo, ukuba ubeka i-stop-loss kwi-ETH / USD ngo-202.12, kwaye ixabiso liyachukunyiswa, iodolo yakho iya kuvalwa ngokuzenzekelayo.
Thatha Inzuzo: Imiyalelo yokuthatha inzuzo ikuvumela ukuba utshixe kwiinzuzo zakho ngokuzenzekelayo. Umzekelo, ukuba ubeka ixabiso lakho lokuthatha inzuzo kwi-ETH / USD ukuya kwi-210.00, kwaye ixabiso liyakhutshwa, urhwebo luya kuvalwa.
Okokugqibela, beka iodolo yakho yokugqibezela inkqubo.
Ukukhetha indawo yokuThengisa ye-Ethereum
Ukuze uthengise i-Ethereum kwi-Intanethi, kuya kufuneka usebenzise iqonga le-Intanethi. Ngamawaka otshintshiselwano nge-imali yedatha kunye nabarhwebi abakwi-Intanethi ngoku abasebenza kwindawo, ukwazi ukuba yeyiphi indawo oza kubhalisa kuyo kunokuba ngumceli mngeni.
Kananjalo, apha ngezantsi uyakufumana uluhlu lweemetrikhi ezibalulekileyo ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuvula iakhawunti.
Njengoko kuphawuliwe ngaphambili, kubaluleke kakhulu ukunamathela kwiindawo zorhwebo ze-Ethereum ezilawulwayo. Sikhetha amaqonga anelayisensi yimibutho efana neCCA, iCySEC, kunye neASIC. Kungenxa yokuba uyakuxhamla kwinani lokhuseleko- kubandakanywa neakhawunti yebhanki eyahluliweyo.
Ukuba uthatha isigqibo sokusebenzisa utshintshiselwano lwe-imali yedatha olungalawulwa, imali yakho isemngciphekweni. Ekugqibeleni, ukuba iqonga ekuthethwa ngalo ligqutshiwe, iimali zakho zemali zinokubiwa. Oku kwenzeke amaxesha ngamaxesha kwisithuba, ke rhoqo khetha indawo yokuthengisa e-Ethereum elawulwayo.
🥇 Iinketho zeDiphozithi kunye nokuRhoxa
wena Emva koko kufuneka ucinge ngendlela oceba ngayo ukufumana imali kwindawo yokuthengisa ye-Ethereum. Kwakhona, ukutshintshiselana nge-imali eyi-cryptocur lwemali kuhlala kuphela inkxaso yedipozithi kunye notsalo ngohlobo lweengqekembe zedijithali. Ngokuchasene noko, abarhwebi abalawulwa yiCFD bamkela uluhlu lweendlela zokuhlawula zemihla ngemihla.
Oku kuhlala kubandakanya idebhithi/ikhadi letyala, iakhawunti yebhanki, kunye ne-e-wallet efana nePayPal, iNeteller, kunye neSkrill. Njengenqaku elisecaleni, kufuneka ujonge kwakhona ukuze ubone ukuba yeyiphi imali encinci yediphozithi kwindawo yakho yokurhweba ye-Ethereum ekhethiweyo.
Zonke iindawo zorhwebo ze-Ethereum zibiza iifizi, ke kuvavanye ukuba uza kuhlawula malini ngaphambi kokuba ubhalise. Njengoko besikhe sakugubungela ngaphambili, oku kunokuvela kwimirhumo yedipozithi / yokurhoxa, iikhomishini zorhwebo, iifizi zokuxhasa ngemali ubusuku bonke, kwaye kunjalo-ukusasazeka. Kwihlabathi elifanelekileyo, uya kuba usebenzisa i-broker enikezela urhwebo olungena-khomishini kunye nokusasazeka okuqinileyo.
🥇 Iibini ezixhasiweyo
Kuya kufuneka uphonononge ukuba yeyiphi na impahla onokuthengisa ngayo i-Ethereum. Ukuba ujonge ukurhweba nge-Ethereum ngokuchasene nemali ye-fiat, kungcono ukunamathela kwi-ETH / USD. Kungenxa yokuba uyakuxhamla kwimilinganiselo emikhulu yokurhweba kunye nemali xa kuthelekiswa nezinye iimali.
Xa kufikwa ekurhwebeni kwe-Ethereum ngokuchasene nezinye ii-cryptocurrencies, jonga ukubona ukuba zeziphi iingqekembe ezixhaswa ngumthengisi. Ngelixa uninzi lwabarhwebi bexhasa iimali ezinkulu zedijithali njengeBitcoin, iRipple, kunye neCash yeBitcoin, kunokufika ixesha apho ufuna ukurhweba nge-Ethereum ngokuchasene neethokheni ze-ERC-20.
🥇 Izixhobo zoPhando
Uya kufuna ukusebenzisa iqonga lokurhweba le-Ethereum elikunika ukufikelela kwiimfumba zezixhobo zophando. Oku kuya kubandakanya izixhobo ezininzi zokufunda kwitshathi kunye nezalathi zobuchwephesha, kunye nokufikelela kwiindaba ezisisiseko sexesha lokwenyani. Kukwaluncedo ukuba indawo yokuthengisa i-Ethereum ibonelela ngezixhobo zemfundo.
Ukuba unomdla ophezulu kumngcipheko, uya kufuna ukukhetha umthengisi we-intanethi onika amandla. Ayizukuchazwa kuphela ngumda othile ngumthengisi, kodwa nendawo okuyo.
Umzekelo, ukuba uhlala e-UK okanye kwi-European Union, uya kufakwa kwi-2x xa uthengisa i-Ethereum. Ngelixa unokufumana ngokubonakalayo ngotshintshiselwano olungalawulwa, iimali zakho zisemngciphekweni.
🥇 Inkxaso abathengi
Kuya kufuneka uphonononge nokuba yeyiphi imijelo yenkxaso yabathengi enikezelwa yindawo yokuthengisa ye-Ethereum. Eyona ndlela ilula yokwenza unxibelelwano kukuncokola bukhoma. Olunye ukhetho lubandakanya i-imeyile, kwaye kwiimeko ezinqabileyo- inkxaso yefowuni.
Indawo yoRhwebo ye-Ethereum egqwesileyo kunye neQonga lika-2022
Awunalo ixesha lokuphanda iqonga lokurhweba i-Ethereum ngokwakho? Ngezantsi uya kufumana indawo yethu ephezulu kakhulu ye-2022. Iqonga lilawulwa kakhulu, likuvumela ukuba ufake imali nge-debit / credit card, kwaye unikezela ngeemfumba ze-Ethereum zokurhweba ngababini.
I-AVATrade - 2 x $ 200 iiBhonasi zokwamkeleka kwi-Forex
Iqela kwi-AVATrade ngoku libonelela nge-20% yebhonasi ye-forex efikelela kwi- $ 10,000. Oku kuthetha ukuba uyakufuna ukufaka i-50,000 yeedola ukuze ufumane elona xabiso liphezulu lebhonasi. Qaphela, kuyakufuneka ubeke ubuncinci be- $ 100 ukufumana ibhonasi, kwaye iakhawunti yakho kufuneka iqinisekiswe ngaphambi kokuba imali ifakwe. Ngokurhoxisa ibhonasi ngaphandle, uyakufumana i-1 yedola kuyo yonke i-0.1 lot oyithengisayo.
Isishwankathelo, iisayithi zokurhweba ze-Ethereum zikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise ii-cryptocurrencies ngokulula. Inkqubo isebenza ubukhulu becala ngokufana norhwebo lwe-forex, kangangokuba kufuneka uqikelele ukuba izinga lotshintshiselwano lwezibini ETH / USD kwaye BTC / ETH iya kunyuka okanye ihle.
Nangona uninzi lweshishini lulawulwa ngotshintshiselwano olungalawulwa lwe-imali yedatha, iindaba ezimnandi zezokuba ngoku unokurhweba nge-Ethereum kumthengisi onelayisensi weCFD.
Ngokwenza njalo, awuzukuxhamla kuphela kukhuseleko lwemithetho yemizimba efana neCCA, i-CySEC, kunye ne-ASIC, kodwa uya kuba nakho ukufaka idipozithi kunye nendlela yokuhlawula yemihla ngemihla. Kungenxa yoko le nto sicebise amaqonga orhwebo e-Ethereum alawulwa kakhulu.
Ndinokurhweba ngantoni no-Ethereum?
Unokuthengisa nge-Ethereum ngeemali ze-fiat njengedola yaseMelika. Unokuthengisa nge-Ethereum ngokuchasene nezinye i-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin, i-EOS, iRipple, kunye neBinance Coin.
Ngaba ndingarhweba nge-Ethereum ngesixhobo?
Ewe ungarhweba nge-Ethereum ngesixhobo. Ukuba usebenzisa i-CFD broker elawulwayo, uya kufakwa kwisilinganisi ongasifaka njengomthengisi wentengiso. Oku kuma kwi-2x e-UK naseYurophu. Ukuba usebenzisa iqonga lokurhweba elingalawulwayo, uya kufumana ngaphezulu kwe-100x.
Yeyiphi idiphozithi encinci efunekayo kwindawo yokuthengisa ye-Ethereum?
Oku kuyokwahluka ngokuxhomekeke kumthengisi. Ukuba usebenzisa indawo yethu yokurhweba ephezulu ye-Ethreum ye-Crypto Rocket, iidipozithi ezincinci ziqala kwi- $ 50 nje.
Yintoni i-Ethereum CFD?
Ngokuthenga okanye ukuthengisa i-Ethereum CFD, ufumana urhwebo nge-cryptocurrency ngaphandle kokuba ube ngumnini weasethi. Oku kuthetha ukuba unokufaka isicelo, ukubandakanyeka kuthengiso olufutshane, kunye norhwebo kwiikhomishini eziphantsi kakhulu. Ii-CFDs zikuvumela ukuba ukhuphe imali kwiinzuzo zakho zokurhweba nge-Ethereum ngonqakrazo lweqhosha.
Ngaba ndingarhweba nge-Ethereum 24/7?
Ewe, iimarike zorhwebo ze-Ethereum- nayo yonke imali yedijithali yento leyo, ivulekile nge-24/7. Oku akufani nendawo yotyalo-mali yemveli, evula uMvulo-ngolwesiHlanu ngexesha lomsebenzi eliqhelekileyo.
Ngaba ndingayifutshane i-Ethereum?
Ewe ungayifutshane i-Ethereum ngokubeka i-odolo yokuthengisa kwi-ETH / USD. Uyakwenza oku ngeCFD, ke gcina iliso kwimirhumo yemali yobusuku.
Ndingayifaka njani imali kwiqonga lokuthengisa le-Ethereum?
Ukuba usebenzisa iqonga elilawulwayo, uya kuba nakho ukusebenzisa imali / ityala okanye iakhawunti yebhanki. Ezinye iindawo zorhwebo ze-Ethereum zide zibonelele ngenkxaso yee-wallets.